अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा चर्काचर्कि, भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विषयमा विवाद – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated May 10, 202070
२८ वैशाख, काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विषयमा छलफल गर्न बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्पष्ट निर्णय नगरेपछि बैठकमा विवाद भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा समितिले कुनै निर्णय नगरेपछि विवाद भएको हो । सांसदहरुले निर्णय नगरी बैठक स्थगित गरिएको र आगामी बैठकका विषयमा समेत स्पष्ट जानकारी नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा उठेका विषयमा जवाफ दिएपनि कुनै निर्णय÷निर्देशन नगरी आगामी बैठक अनिश्चित भएपछि सांसदहरुले बैठकको मिति तोक्नपभर्ने भन्दै अडान लिएका थिए । सांसद भीम रावलले देशको स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप भएपनि समितिले बैठकको मिति तय गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
बैठक सकिएपछि समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले ‘‘भरसक भोली नै बैठक बस्ने सोच हो र भोली मन्त्रीज्यूको समय मिल्यो र सदन नरहने अवस्थामा ११ बजे नै बैठक बस्छौँ । तर अहिले नै यसलाई म ढुंगो दिन सक्दिन’’ भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
लगत्तै रावलले ‘संसदको कुरा गर्नुभयो संसद के का लागि’ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ? ‘‘देशको सार्वभौम सत्तामाथि नाङप्गो हस्तक्षेप भएको छ । अनि समय के का लागि हो । सरकार के का लागि हो । देश केका लागि ? यो भन्न मिल्दैन् । या अहिले समितिमा बोल्न पाउनुपर्छ या बैठकको समय निर्धारण हुनुपर्छ । माननिय सभापति ज्यू देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षाभन्दा ठूलो कुरा के हो ? मलाई सुनाउनुहोस् ।
बैठकको समय तय हुनुपर्छ र त्यो बैठकमा कुरा राख्न पाउनुपर्छ । त्यो बैठकबाट निर्णय हुनुपर्छ । यसरी बैठकका विषयमा अहिले भन्न सक्दिन भन्न मिल्दैन् ।’’लगत्तै सभापति निरौलाले ‘माननिय ज्यू गम्भिर विषयको छलफल हुनुपर्छ । आजै सक्न पाए हुन्थ्यो ।’ भनेपछि बाँझाबाँझ थपिएको थियो ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण अघि बढ्दै